I-induction Brazing I-HAVC Imibhobho enesiQinisekiso esiPhezulu seBrazing
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Imibhobho ye-HAVC ye-Induction
iindidi: Ukukhangela ibhola, umshini wokukrazula tags: Brazing, ukuhombisa i-HVAC, ibhondi yeHVAC, ubhedu obhedu, Ubhedu lweHVAC, imibhobho yobhedu, HVAC, Isifudumezi seHVAC, Icandelo le-HVAC, Induction Brazing HVAC Imibhobho, Uqheliso lwe-hvac brazing, Ukuchithwa kwe-HVAC heater, Induction HVAC heater
Induction Brazing HVAC Imibhobho
Imibhobho yefriji ihlala ibrazed njengokuba ibhrashi yenza indibaniselwano eqinileyo evuzayo ngaphandle kokuma kumaqondo obushushu aphezulu kunye asezantsi kunye noxinzelelo. Xa ityhubhu yefriji yefriji kungcono ukusebenzisa i-solder enokwakheka kwesilivere kuyo njengemida yesilivere kunye nobhedu kwaye yenza ukuvuza okuqaqambe kakhulu okuhlangeneyo okuqinileyo (umtsalane we-capillary).
Ukwenziwa kwe-HLQ ziingcali ekuyileni izisombululo zokufudumeza ungeno kwiziko lokushicilela iinxalenye zecompressor, izinto zokufudumeza kunye nabasasazi bobushushu.
Iimoya zomoya zineengxenye ezininzi ezixutywe. Izinto eziqhelekileyo zezobhedu kunye nealuminium:
Amalungu eAluminiyam, umzekelo i-evaporator kunye nokunxibelelana kwe-condenser (ityhubhu ukuya kwityhubhu, ityhubhu-yokuvimba, ityhubhu ukuya kwitanki)
Izilinganisi ze-Tube-to-unit kwi-condenser unit
Tube-to-izixhobo kwiyunithi ye-evaporator
Tube-to-valves kwiinkqubo zokuhambisa
Ukukhangela ibhola Kuyafana nokufaka phakathi ngaphandle kobushushu obungaphezulu kwama-800 degreesF.
Ngobhedu, ikhonkrithi esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ibizwa ngokuba yi-sil-phos njengoko ibonwayo ngasekhohlo.
Kukho iintlobo ezininzi zeli khompawundi.
I-15% ye-Phosphorus / iCopper / i-Alloy Alloy lolunye uhlobo olusebenzisa i-15% yesilivere kwaye yimigangatho yeetekhnoloji zenkonzo ezenza ukulungiswa kwezixhobo zefriji. . Ayisebenzi kunye ne-5%.
Kukho iPhosphorus / iCopper Alloy engenaso isilivere endiyifumanisa ingenamsebenzi kulungiso.
ICopper Brazing yeShishini leHVAC
Iityhubhu ezininzi zobhedu zesilivere ezifakwe ngumnini weMSI Automation Itekhnoloji yobhedu yoqhelisoUkufudumeza ubushushu ngetekhnoloji efanelekileyo yokufudumeza i-coil kunokubangela ukuphindaphinda kwesilivere ityhubhu yobhedu iphela kwifoto enye. Le nkqubo isusa ukudinwa kwetotshi yesandla edinisayo, iphucula ukungaguquguquki kwaye inciphise ithuba lokuvuza konxibelelwano.
Ukudityaniswa ngokudibeneyo phakathi kwetyhubhu yobhedu kunye nomzimba wobhedu kugqityiwe. Ixesha lokufudumeza usebenzisa iMSI ekhethekileyo i-coil coil Ngu-1/4 lowo uyilo oluqhelekileyo lokujikeleza ityhubhu yobhedu.